Hal UI 3.1 oo loogu talagalay Galaxy Tab S6 wuxuu bilaabmayaa laba bilood kahor jadwalka | Androidsis
Hal UI 3.1 oo loogu talagalay Galaxy Tab S6 wuxuu bilaabmayaa laba bilood ka hor jadwalka
Mar labaad, ragga Samsung waxay muujinayaan in shirkadda xiisaha ay u leedahay cusboonaysiinta taleefannadooda ay ka baxsan tahay ballamo, maaddaama ay hadda bilaabeen Hal cusbooneysiin UI 3.1 oo loogu talagalay Galaxy Tab S6, laba bilood ka hor taariikhda markii hore loo qorsheeyay, taasi waa, hadda kaliya Jarmalka, laakiin waa arrin maalmo ka hor inta aysan gaarin Yurub inteeda kale.
Cusboonaysiintaan cusub ayaa hadda loo heli karaa SM-865, a moodel la xidhiidha LTE. Cusbooneysiintu waxay fadhidaa 2,2 GB, oo ay kujirto balastarka amniga ee u dhiganta Maarso 2021 lambarka firmware-na waa T865XXU4CUB7.
Marka laga hadlayo soosaarida nooca loogu talagalay Galaxy S6 iyada oo aan lahayn xiriir LTE ah, waxay noqon doontaa arrin dhowr toddobaad ah xaalada ugu xun, in kasta oo had iyo jeer ay jirto suurtagalnimada in Samsung ay sugi doonto labada bilood ee soo socota si ay ugu bilawdo suuqa, inkasta oo ay aad u yar tahay.
Munaasabaddan, ragga ka socda Samsung ka booday Hal UI 3.0, maxaa yeelay haddii aad isticmaale u tahay aaladdan, waxay ka gudbi doontaa in lagu maamulo One UI 2.5 ilaa One UI 3.1, oo ah nooc ka mid ah lakabaynta qaabeynta oo ay ku jiraan tiro badan oo ka mid ah hagaajinta, astaamaha cusub iyo isdhexgalka isticmaalaha oo la hagaajiyay.
Si aad u hubiso in cusbooneysiintan cusub horeyba looga heli karo waddankaaga, waa inaad tagtaa oo keliya Dejinta - Cusboonaysiinta Software. Haddii la heli karo, waxaa lagugula talinayaa inaad kaniini si aad u buuxiso oo aad u fadhiisato inta ay cusbooneysiineyso.
Haddii kale, oo aad rabto inaad ka mid noqoto kuwa ugu horreeya ee ku raaxeysanaya dhammaan wararka la yimaada mid ka mid ah UI 3.1 ee Galaxy Tab S6, waxaan kugula talinayaa inaad aado bogga ragga SamMobile oo soo dejiso noocaan. Si aad u rakibto, adiga kombiyuutar Windows lagu maamulo ayaa loo baahan doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Hal UI 3.1 oo loogu talagalay Galaxy Tab S6 wuxuu bilaabmayaa laba bilood ka hor jadwalka
Sida loo abuuro astaantaada gaarka ah ee ku jirta Chrome: ciwaanka cusub ee biraawsarka dib loo habeeyay ee kombiyuutarada iyo in ka badan
Boqoradda: Rock Tour oo hadda la heli karo oo ah ciyaar muusiko ah si loogu noolaado hitskii kooxda dhagaxa